Vashandisi muDenmark, Sweden neHong Kong vava kukwanisa kubhadhara yavo iTunes kutenga kuburikidza nefoni yavo bhiri | Ndinobva mac
Vashandisi muDenmark, Sweden neHong Kong vava kukwanisa kubhadhara yavo iTunes kutenga kuburikidza nefoni yavo bhiri
Kubva panguva yekuva chikamu isu tiri kuona maanofesi ari kupa zvipo zvekushandurana matinogona kuita kondirakiti pamwechete, runhare, terevhizheni, internet uye nhare kuribhadhara mune imwe invoice. Asi vanoshanda havasi ivo vega, nekuti Apple iri kuyedzawo kubatanidza kutenga kwatinoita kuburikidza nemidziyo yayo nemari yedu yefoni, kuitira kuti vashandisi vasingazeze vasingamanikidzwe kushandisa kiredhiti kadhi kutenga kwako, chimwe chinhu icho iyi poindi ichiri kupfuura zvakajairwa. Nyika dzichangoburwa kuwedzerwa pane urwu runyorwa ndiDenmark, Hong Kong neSweden.
Kubva panguva ino zvichienda mberi, chero mushandisi we iPhone anogara munyika idzi uye ane runhare rwakatengwa ne SmartTone kuHong Kong, Telenor Sverige AB muSweden neVatatu kuDenmark vanozokwanisa kubhadhara yavo Apple Music kunyorera, kutenga kwavanoita kuburikidza iTunes, kutenga mabhuku, kubhadharisa bhaisikopo, Mac App Store kutenga zvakananga pakupera kwemwedzi pamwe nemari yebhiri. Sezvo isu tichiona, iyi sarudzo inopa inoshamisa nyaradzo uye chengetedzo kune vashandisi vasingade kushandisa yavo kadhi online.
Parizvino iyi nzira yekubhadhara inowanikwa munyika gumi nenomwe kuburikidza nevashandisi makumi maviri nevapfumbamwe. Pakati penyika dzinonyanya kukosha dzinopa sevhisi iyi France, Germany, Italy neJapan. Nekudaro, kushomeka kunonyanya kuzivikanwa kubva pane urwu runyorwa kunowanikwa muUnited States, United Kingdom neCanada, chimwe chinhu chisinganyatsonzwisisika, kunyanya kufunga kuti Apple iAmerican uye painofanirwa kuve nesarudzo iyi kwenguva yakareba, asi Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti maAmerican havanyanye kufarira iyi fomu yemafomula, nzira yakasununguka yekubhadhara uye kuti haifanire kutora nguva kusvika kune dzimwe nyika dzinotaura chiSpanish.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Vashandisi muDenmark, Sweden neHong Kong vava kukwanisa kubhadhara yavo iTunes kutenga kuburikidza nefoni yavo bhiri
Apple yakanyudzwa mukugadzirwa kwemabhatiri emota dzemagetsi